Aan Idinka Jawaabo Mubarakan Inuu Yahay Filim Wanaagsan? | Filimside –
Aan Idinka Jawaabo Mubarakan Inuu Yahay Filim Wanaagsan?
Jul 31, 2017 - 1 Jawaab
Filimka Mubarakan ee tiyaatarada saaran sheekadiisa dadka filimada ka faaloodaan si weyn ayay u amaaneyn sidoo kalena sheekada filimkaan jimcadii ayaan idinla wadaagnay.
Haddaba waxaa i suura gashay inaan tiyaatarka ka daawado filimka Mubarakan ee hogaamiyaal Ka yihiin Anil Kapoor, Arjun Kapoor, Ileana D’cruz iyo Athiya Shetty.
Haddab Filimka Mubarakan ma yahay filim wanaagsan aan Idinla wadaago dhankeyga Qodobo aan ku Dhaliilay ama uu ku wanaagsan yahay ?
Sheekada filimka Mubarakan iyo isku xirkiisa
Hadaa hori u aqrisatay sheekada filimka Mubarakan oo aan idinla wadaagnay waa hubaal waxba kama qaldana sidoo kale waxaa idin sheegnay in filimkaan uu yahay filim madalaalo dhameestiran leh oo shactiro socdo ah looguna tala galay qoyska.
Is ku xirka filimka Mubarakan habka loo sameeyay waxaa ku amaanan filim sameeyaha weyn Anees Bazmee oo looga haray filimada shactirada badan filimkaan badankiisa waxaa lagu duubay london iyo Punjab.
Filimka Mubarakan ee hogaamiye ka ahaayeen Anil Kapoor, Arjun Kapoor, Ileana D’cruz iyo Athiya Shetty. waxaa ugu bandhig wanaagsanaa Super Star Anil kapoor, doorkiisa Kartar Singh oo ah mid loo daawan doono filimka Mubarakan.
Anil Kapoor filimka Mubarakan wuxuu ka jiliin wanaagsan yahay labada door Arjun Kapoor ee karan iyo Charan laakiin kuma niyad jibi doono Arjun oo labadiisa door si weyn kaaga yaabin doono qaabka uu u sameeyay filimkaaan shactirada ah.
Labada atiriisho ee filimka Ileana D’cruz iyo Athiya Shetty waxaa door wacan filimka ku lahaa Ileana oo ka muuqal badneyd Athiya Shetty sidoo kale Athiya doorkeeda Binkle waa mid wanaagsan kuna matalaysay qof dagan oo jacel Charan.
Sidoo kale filimkaan waxaa ka baxsaday oo doorar muhiim ah ku leh oo ku xiiso kalin doona Neha Sharma, Rahul Dev, Karan Kundra, Ratna Pathak, Pavan Malhotra, iyo Krishan Tandon.
Fikirkeyga Ku Aadan Filimka Mubarakan
Filimka Mubarakan waa filim shactiro dhameestiran ah oo aadan marnaba ku caajisi doonin laakiin waa filim aad fahmi karto wax walbo oo dhacaayo balse waxaa xiiso u yeelay filimkaan filim sameeye Anees iyo qaabka uu shactirada u dhigay.
Hadii Arjun Kapoor uu ahaan lahaa jilaa weyn oo filimada gadi kara waxaa hubaal ahaan lahaa in filimka Mubarakan 3 maal mood lacago badan kusoo xareyn lahaa sidoo kalena noqan lahaa filim guul weyn gaara.
Sidoo kale filimka Mubarakan waxaa guushiisa hor isaagi doona filimka Jab Harry Met Sejal oo la daawan doono jimcada waa hadii uu hoos u dhac weyn samaynin maal maha shaqada.
Siduu Ahaa Goobta Aan ka Daawanaayay Filimka Mubarakan
Tiyaatarka ama cinema-ada aan ka daawanaayay filimka Mubarakan wuxuu ahaa meel la buuxa oo dad Hindi u badan isku imaadeen runtii filimka siduu u bilawday ilaa dhamaadka waxaana dareemaayay in dadka si weyn ugu heleen shactirada ayagoo qosal isku celin waayeen Mid ka mid dadka filimka daawanaayay xitaa wuu sacbiyay qaabka shactirada loo dhigay
Hadaa ka hadlo aniga ahaan dadka ayaa ka mid ahaa oo aniga iyo asxaabteyda qosalka ayaa naga dhamaaday wuxuuna ahaa filim xiiso leh oo aan marnaba ku caajisin sidoo heesaha filimkaan wuxuu ahaa mid heer sare ah oo si weyn loo sameeyay.
Halkee Ka Daawaday Filimka Mubarakan
Filimka Mubarakan xalay waxaa ii suurta gashay asigoo HD inaan ku daawaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Garden City Mall waxaana tikit-kiisa ku iibsaday 700 Shillin oo lacagta Kenya una dhigantaa $7.
Filimka Mubarakan oo kooxda filimada ka faaloodeen amaan kala dul dhaceyn wuxuu ahaa mid sax waana filim qoyska loogu tala galay haddaba hadaa tahay qof filimada shactirada xiiseeyo filimka Mubarakan ka daawo tiyaarka kuu dhow waa hubaal kuma caajisi doontid.
Qiimeyn ahaan filimka Mubarakan waxaa siiyay 3.5/5 midaas oo ka dhigan flimka Mubarakan sheekadiisa wanaagsan tahay.
Waadku mahadsanatahy Aqirskaaga
Waxaa Aqriyay: 1,307
mawlana khan says:
“( Aadan mahadi korkaaga Ha Ahaato Sxp )”